PUBG Mobile မှာ Royale Pass ဘယ်လိုဝယ်မလဲ | Codashop Blog MM
Home Games PUBG Mobile PUBG Mobile မ...
PUBG Mobile မှာ Royale Pass ဘယ်လိုဝယ်မလဲ
PUBG Mobile မှာ အမိုက်စားgear တွေနဲ့ premium rewards တွေ စုဆောင်းထားချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါသလား? အဲဒါဆိုရင်တော့ Royale Pass ဟာ ထူးခြားတဲ့ loot ပေါင်းများစွာနဲ့ တခြား items တွေ ရဖို့ ရွှေလက်မှတ်ပါပဲ။ ဒီ post ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Royale Pass ကို မရှုပ်မထွေးဘဲ ဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးသွားမှာပါ။
Royale Pass ကဘယ်လိုမျိုးလဲ
Royale Pass က PUBG Mobile မှာ ကစားသူတွေ rewards တွေရရှိနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ သူက ရာသီအလိုက် event ဖြစ်ပြီး ကစားသူတွေက မတူညီတဲ့ mission အမျိုးမျိုးမှာ ပါဝင်နိုင်ပြီး အဆင့်တွေလည်းတက်၊ အမိုက်စားဆုတွေလည်းအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့ ဆုတွေကတော့ သင့်ရဲ့ tier အပေါ်မူတည်ပြီး ၁ဆု ကနေ အများဆုံး ၁၀၀ထိ ရနိုင်ပါတယ်။ Rank တက်ဖို့ဆို ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ Royale Pass Points တွေကိုစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။
RP Daily Missions တွေနဲ့ Challenge Missions တွေပြီးအောင်ဆော့ပါ။ Elite Pass ရှိတဲ့သူတွေကတော့ rank မြန်မြန်တက်ချင်ရင် Elite Mission တွေကိုလည်းဆော့ခွင့်ရမှာပါ။
Weekly challenges တွေ ကစားပြီး events တွေကိုလည်း join ခြင်းဖြင့် RP Points တွေရမယ့် RP Point Cards တွေလဲရနိုင်ပါတယ်။
Crates တွေဖောက်ခြင်းကနေလည်း Royale Pass Points တွေအလကားရနိုင်ပါတယ်။ (ကံကောင်းရင်ပေါ့)
In-game events တွေမှာ ပါဝင်ခြင်းနဲ့လည်း points တွေရနိုင်ပါသေးတယ်။
Daily Missions တွေက လွယ်ပေမယ့် Challenge Missions တွေက နည်းနည်းခက်နိုင်ပါတယ် တချို့ missions တွေဆို Elite Pass members တွေအတွက်ပဲ ကစားလို့ရပါတယ်။ Season ၁ခုပြီးတိုင်းမှာ ကစားသူတွေက ထပ်တိုးဆုတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့ rating အတိုင်းရဦးမှာပါ။ အမြင့်ဆုံး rank ကိုရောက်ရင်တော့ နောက် season pass ကို upgrades လုပ်ရင် 600 UC ထပ်ရပါတယ်။ Elite Royale Pass က ဆုတွေဆို 30,000 UC လောက်တန်ပါတယ်!
Royale Pass ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
PUBG Mobile မှာ Royale Pass ဝယ်ဖို့ Elite Pass အတွက် အနည်းဆုံး 600 UC နဲ့ Elite Pass Plus အတွက် 1800 UC ရှိဖို့လိုပါတယ်။ Top up လုပ်ဖို့ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ UC လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကအဆင့်တွေအတိုင်း ဆက်လုပ်နိုင်ပါပြီ။
သင့်စမတ်ဖုန်းထဲမှာ PUBG Mobile ကိုဖွင့်ပါ။
Screen ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ဆုံးနားက RP နေရာကို နှိပ်ပါ။
ညာဘက်အောက်နားက Upgrade Pass ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါ။
Royale Pass ၂မျိုး( Elite Pass နဲ့ Elite Pass Plus )ထဲက ၁ခုရွေးပါ။
Purchase ကိုနှိပ်ပြီးရင် ငွေပေးချေလို့ရပါပြီ။
ပေးချေပြီးရင်တော့ UC (Unknown Cash လို့ခေါ်တဲ့ PUBG ရဲ့ in-game ငွေကြေး) ကို သင့်ရဲ့ PUBG Mobile Account ထဲကနှုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Royale Pass ကတော့သင့်ဆီရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လောက်တောင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်နော်!
Royale Pass အမျိုးအစားများ
Elite Pass : ဝယ်ဖို့ 600 UC လိုပါတယ်။ Rank တက်ရင်တော့ rewards တွေ ၁၀၀ အထိရနိုင်ပါတယ်။ ကစားသူတွေက 25 ranks ရပါတယ်။ တခြား သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်တွေနဲ့ 4000 UC တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုတွေလည်းချက်ချင်းရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Elite Pass Plus: 1800 UC ကျပါတယ်။ Rank တက်ရင်တော့ rewards တွေ ၁၀၀ အထိရနိုင်ပါတယ်။ Elite Pass မှာရသမျှအခွင့်အရေးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူတွေက 25 ranks ရပါတယ်။ 10000 UC တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုတွေလည်းချက်ချင်းရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကစားသူတွေအားလုံးအတွက် Free Pass လည်းရပါသေးတယ်။
Free Pass: ကစားသူအကုန်လုံးရနိုင်ပါတယ်။ Mission တွေပြီးအောင်ကစားရင် rank တက်ဖို့ Royale Points တွေ items တွေနဲ့ crates တွေရပြီး ဆုတွေလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် Royale Pass ကိုရပြီးပြီလား? အခုချိန်ထိသင့်အကြိုက်ဆုံးဆုက ဘာပါလဲ? Codashop မှာ PUBG Mobile အတွက် UC တွေ top up လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဒီမှာလည်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူပြီး လျင်မြန်တဲ့ top-ups တွေကို login/ password မလုပ်ဘဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Previous articleအကောင်းဆုံး Free Fire နာမည်ပေးခြင်း
Next articleWavePay နဲ့ Codashop မှာဝယ်ပြီးပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်း
PUBG Mobile အတွက် EasyPoints နဲ့ ဝယ်ပြီး 52% အထိ U...